We Fight We Win. -- " More than Media ": ကံမ ဖျက်စီးမူ နောက်ဆက်တွဲသတင်း(ဗလီနှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏အိမ်ဖျက်စီးမှုတွင် ကြံဖွတ်အမတ်ပါဝင်ပါတ်သက်)
ကံမ ဖျက်စီးမူ နောက်ဆက်တွဲသတင်း(ဗလီနှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏အိမ်ဖျက်စီးမှုတွင် ကြံဖွတ်အမတ်ပါဝင်ပါတ်သက်)
ခင်ဗျားအိမ်တစ်အိမ် တည်းကပဲ ဘာဖြစ်လို့လာပြီးအမှုဖွင့်တာလဲ” ဟု ကံမမြို့ ရဲစခန်းမှူးက ပြန်ပြောကြောင်းကိုယ်တိုင်အမှု ဖွင့်ရန် သွားရောက်ခဲ့သူ ဦးဌေးလွင်က myanmarmuslim.net သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအထက်ပါဖြစ်ရပ်သည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အမတ် ဦးဝင်းနိုင် ၏ လှုံ့ဆော်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်ဟု ဟာဂျီမ ဒေါ်ဝါ၀ါ က myanmarmuslim.netသို့ ပြောကြားသည်။“ကျွန်မတို့အမျိုးတွေအိမ်အားလုံး အဖျက်ခံရတယ်၊ တစ်ယောက်ပဲအဖျက်မခံရဘူး၊ အဲဒါက ကျွန်မဦးလေး ဦးမောင်ကိုအိမ်၊ သူက ဦးဝင်းနိုင်ရဲ့ အဒေါ်၊ ဒေါ်အမလေးနှင့် အိမ်ထောင်ကျတာ ဒါကြောင့်မို့လို့အဖျက်မခံရတာ”ဟု ဟာဂျီမ ဒေါ်ဝါ၀ါ က ပြောကြားသည်။
Source : Myanmarmuslim.net
Islam is cruel. the more u believe in quran the crueler u will be. r u muslim ko moe thee???
ကိုမိုးသီးက ဘင်္ဂါလီကပြား မွတ်စလင် သွေး ပါတယ်လို့ သူကိုယ်တိုင် ပြောဖူးတယ်။သူ့သွေးထိလို့ သူနာတာ ဆန်းသလား။ပုံ-မွတ်သီးဇွန်